जन्मदिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पत्नीसंग रोमान्स, केक काट्दै भने ‘हावा खुस्काइदिउँ’ ? – Etajakhabar
जन्मदिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पत्नीसंग रोमान्स, केक काट्दै भने ‘हावा खुस्काइदिउँ’ ?
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शुक्रवार ६७ वर्षका भए । उनले आफ्नो तर्फवाट जन्मदिन मनाउने कुनै कार्यक्रम तय नगरेका भएपनि उनका सुभेक्छुकहरुले त नमनाई बस्ने कुरै भएन । उनले सुभेक्छुकको इच्छामा आफ्नो ६७औँ जन्मदिन मनाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्ना सुभेक्छुककले ल्याइदिएका दुईवटा केक एका विहानै प्रधानमन्त्री ओलीले काटे।
एका विहानै केक पठाउने उनको पार्टी कार्यालयवाट नेताहरुले पठाएको थियो भने अर्काे मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले लिएर गएको थियो । जन्मदिन मनाउने कुनै पुर्व योजना नभएका कारण ओली पत्नी राधिका शाक्य पार्टी कार्यालयवाट पठाएको केक घरमा पुग्दा सम्म घरबाहिर निस्केकी थिइन । उनलाई धेरै बेर कुदा पनि आली पत्नी घरमा आइपुगीनन् । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यालयका तर्फवाट पठाएको केक पार्टीका साथीहरुसंग मिलेर काटे ।
त्यसपछि मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले ल्याएको केक काट्ने पालो आयो । त्यतीबेला भने पत्नी राधिका शाक्य घर आइपुगिन् । एकेडेमीले ल्याएको केक फुटबल आकारको थियो । उनले फुटवल आकारको केक अगाडी सार्दै पत्नी शाक्य तर्फ हेर्दै भने आउ केकको हावा फुस्काइदिउँ ?
यो केक भने पती पत्नी दुवै मिलेर संगै काटे । पत्नी राधिकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई केक खुवाउँदै माया देखाइन् । आलीको स्वास्थ्य प्रति चिन्तित शाक्यले भनिन धेरै केक नखानु अझै खान बाँकी छ । ओलीलाई जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिन चीनका राजदुत यु होङ र भारतका राजदुत मन्जिभ सिंह पुरी समेत बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: १२:२०:५८